China AIRFREE Industrial / Commercial Wall Mounted Fan Manufacturing and Factory | Kale
AIRFREE Industrial / Commercial Wall Mounted Fan
AIRFREE 2M HVLS Rindrina Fan miaraka amin'ny Motera PMSM
Ny andian-dahatsoratra Airfree dia mpankafy avo lenta izay mety ho valin-drihana sy rindrina novolavolain'i Kale. Ny totalin'ny haavony dia 2m, ary ny rivotra dia azo amboarina araka ny fepetra takian'ny tranokala. Ny lelan'ny mpankafy dia entin'ny PMSM miaraka amin'ny vokatra lehibe. Amin'ny fahavaratra mafana, ny andian-dahatsoratra Airfree dia afaka mitondra vokatra mangatsiaka mitovy amin'ny mpankafy kely mihoatra ny 20, izay azo ampiharina amin'ny tontolo sarotra indrindra.
Airfree Series Kale Fans dia mpankafy mitsitsy angovo mipetaka amin'ny rindrina miaraka amin'ny maotera PMSM, savaivony 1.5-2m, izay afaka manome rivotra mahery vaika, ny halavirana mahomby dia mihoatra ny 36m, ka ny mpankafy iray dia afaka mandrakotra kianjan'ny basikety iray manontolo. Airfree Series Kale Fans dia ampiasaina indrindra amin'ny toeram-pambolena indostrialy, ara-barotra ary toeram-pambolena. Ny halaviran-drivotra lava lava, ny halaviran-drivotra mahomby dia mihoatra ny 24m, afaka mandrakotra mihoatra ny antsasaky ny halavan'ny kianjan'ny basketball.
Fametrahana valin-drihana sy rindrina mihantona, izay azo omena araka ny filan'ny tontolo iainana. Ny totalin'ny herin'ny mpankafy dia 0.4kW, ambany dia ambany ny fanjifana angovo, ary dolara vitsivitsy monja no lany amin'ny fandehanana mandritra ny tontolo andro. Ny tabataba dia ambany dia ambany, ny haavon'ny tabataba dia 43dB, ary ny feo miresaka eo akaikin'ny mpankafy dia tsy hisy fiantraikany rehefa mandeha ny mpankafy. mora ny miasa.Ny kilasy fiarovana IP55, tantera-drano amin'ny ankapobeny, dia afaka mandeha ara-dalàna amin'ny andro mando amin'ny andro orana; mora diovina.
Kilasy basikety ho fampitahana
Ny hafainganan'ny rivotra amin'ny faritra tsirairay dia miovaova, ary ny ampahany misy alokaloka dia maneho ny haavon'ny hatsiaka amin'ny hafainganan'ny rivotra; ny maizina kokoa ny loko alokaloka no avo kokoa ny hafainganam-pandehan'ny rivotra amin'ity faritra ity.
Ny halaviran'ny famatsiana rivotra dia mihoatra ny halavan'ny ankamaroan'ny kianja filalaovana basikety antsasaka, mahatratra 24m mahery;
1.Kajy lanja: Ny lanjan'ny vatana lehibe dia tsy ahitana ny boaty fanaraha-maso, fanitarana fantsona, ambony fifandraisana faritra, sns.
2.Product savaivony: voatanisa etsy ambony dia ny savaivony fenitra vokatra, fepetra hafa mila namboarina.
3.Hery fampidirana: dingana tokana 220V ± 10%
4.Motera mitondra fiara: PMSM (motera synchronous andriamby maharitra).
teo aloha: AIRPOLE Commercial Large Pedestal / Stand Fan
Manaraka: AIRMOVE Movable PMSM Portable Fan